नेपाली बालसाहित्यमा नयाँ किताब | Ketaketi Online
Home » नेपाली बालसाहित्यमा नयाँ किताब
नेपाली बालसाहित्यमा नयाँ किताब
posted by ketaketionline on Fri, 09/17/2021 - 19:22
यो आदरणीय लेखक रामबाबु सुवेदी लिखित बालगीतहरुको सचित्र संग्रह हो । यस किताबमा हरेक गीतसँगै आकर्षक रंगिन चित्र र स्वरलिपि समेत प्रकाशित गरिएको छ । चित्रमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र संगीतमा डिल्लीप्रसाद चापागाईंले काम गर्नुभएको छ । नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा प्रकाशित यस कृतिको अनुवाद महेश पौड्यालले र स्वरलिपि मनोहर सुनामले तयार गर्नुभएको हो ।
किताब चरो, नेपालद्वारा प्रकाशित यस कृतिमा समावेश गीतमा आदरणीय गायक रामेश श्रेष्ठको गहकिलो भूमिका रहेको छ । संगीतकारहरु शीलाबहादुर मोक्तान, कुन्दन राई, प्रमोद उपाध्याय, सुनील बर्देवा, बी.बी. अनुरागी र आशिष अविरलले संगीत संयोजन गर्नुभएको छ । साथै रेकर्डिस्ट भोला पौडेलको सहयोग रहेको छ । गायकगायिकाहरु कुन्ती मोक्तान, लोचन भट्टराई, आनन्द कार्की, उदय सोताङ, अन्जु पन्त, विमलराज क्षेत्री, बेनुका राई, माण्डवी त्रिपाठी, मिलन नेवार, बानिका प्रधान, देवी घर्ती मगर, भीमप्रसाद चापागाईं, रत्नशोभा महर्जन र श्लेष्मा क्षेत्रीले सुमधुर स्वरमा कृतिमा समावेश गीतहरु गाउनुभएको छ । यस कृतिमा समावेश सर्जकहरुको परिचय ख्यातिप्राप्त लेखक अमर न्यौपानेले तयार गर्नुभएको छ ।
रंगिन साजसज्जामा एफोर आकारमा १४४ पृष्ठ रहेको यस कृतिको मूल्य रु. ७५० रहेको छ । यस कृति प्रकाशनमा बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले सहयोग गरेको किताब चरो, नेपालका महासचिव डा. श्यासुन्दर चौधरीले आफ्नो प्रकाशकीय मन्तव्यमा जानकारी गराउनुभएको छ ।